Football Khabar » लगातार अंक गुमेपछि रोनाल्डो ‘असन्तुष्ट’ !
लगातार अंक गुमेपछि रोनाल्डो ‘असन्तुष्ट’ !
पछिल्ला तीन खेलमा दुई खेल नहारेको भए इटालियन क्लब युभेन्टस अहिले सिरी ए लिगमा स्पष्ट ६ अंकको अग्रतासहित उपाधितर्फ अघि बढ्ने थियो । तर, युभेन्टसले पछिल्लोपटक भेरोनासँग २–१ र त्यसअघि नापोलीसँग २–१ ले हारेपछि युभेन्टसले ३ खेलका बीचमा ६ अंक गुमायो । उसले नापोलीसँग हारेपछि फियोरेन्टिनालाई ३–० ले हराए पनि लगत्तै भेरोनासँग २–१ ले पराजित हुन पुग्यो ।
तीन खेलमधये दुई खेलमा हारेपछि युभेन्टसले ६ अंक मात्रै गुमाएन, अंक तालिकाको शीर्ष स्थान पनि गुमायो । हाल अंक तालिकामा युभेन्टस र शीर्ष स्थानको इन्टर मिलानको समान ५४–५४ अंक छ । तर, गोलअन्तरमा अघि रहेर मिलान शीर्ष स्थानमा छ । लिगमा अब मात्रै १५ खेल बाँकी छन् ।
टिमले लिगमा लगातार अंक गुमाएपछि टोलीका प्रमुख फरवार्ड क्रिस्टिानो रोनाल्डो निकै ‘असन्तुष्ट’ बनेको खबर इटालियन मिडियाले छापेका छन् । पछिल्लोपटक भेरोनासँग अग्रता गुमाएर हारेपछि रोनाल्डो मैदानमा निकै निराश देखिन्थे भने पनि ड्रेसिङ रुममा पनि उनले सहकर्मीसँग असन्तुष्टि पोखेको खबरमा उल्लेख छ ।
भेरोनाविरुद्ध रोनाल्डोले टिमका लागि दोस्रो हाफमा गोल गरे पनि पछि २ गोल खाएपछि टिम २–१ ले पराजित भएको थियो । सो खेलमा रोनाल्डोले लिगमा लगातार १०औं खेलमा कीर्तिमानी गोल गरेका थिए । व्यक्तिगत रूपमा रोनाल्डोले उच्च प्रदर्शन गर्दै आए पनि टिमले लगातार अंक गुमाउँदा उनी टिमको प्रदर्शन र नतिजाबाट बेखुसी रहेका हुन् ।
गत सिजनभरमा कूल २१ गोल गरेका रोनाल्डोले यसपटक २० गोल गरिसकेका छन् । अब मात्रै १ गोल गरे उनले लिगका १४ खेल बाँकी छँदा गत सिजनभरमा गरेजति गोल पूरा गर्नेछन्, जुन निकै राम्रो तथ्यांक हुनेछ ।
युभेन्टसले जारी सिजन लिगका २३ खेलमा १७ खेल जितेर ३ खेल बराबरी गर्दा ३ खेल हारिसकेको छ । उता, लिग लिडर मिलानले भने यो सिजन मात्रै एक खेल हारेको छ भने भने ६ खेल बराबरी गरेको छ । मिलान पछिल्ला पाँच खेलमा अपराजित रहँदा युभेन्टसले दुई खेल हारिसकेको छ ।
प्रकाशित मिति २९ माघ २०७६, बुधबार १८:३८